WARBIXIN: 33 xaqiiqooyin ku saabsan Cristiano Ronaldo Oo Laga Yaabo In Aanad Ogayn – Kooxda.com
Home 2018 February Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: 33 xaqiiqooyin ku saabsan Cristiano Ronaldo Oo Laga Yaabo In Aanad Ogayn
WARBIXIN: 33 xaqiiqooyin ku saabsan Cristiano Ronaldo Oo Laga Yaabo In Aanad Ogayn
Xiddiga kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa 33 jirsaday isaga oo ku sii dhawaanayay wakhtigii uu iska siibi lahaa kabaha lagu ciyaaro.
Xiddiga reer Portugal ayaa ka mid ah xiddigaha ugu fiican ee soo mara taariikhda kubada cagta isaga oo ku guulaystay koobab badan isla markaasna jabiyay rikooro badan qaar kalena dhigay.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 33 xaqiiqo oo laga yaabo in aanad ka ogayn kabtanka reer Portugal:
1.Waa xiddiga 2-aad ee ugu goolasha badan taariikhda horyaalka La Liga: Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 294 gool 274 kulan oo uu ciyaaray waana xiddiga 2-aad ee ugu goolasha badan taariikhda tartanka La Liga.
2.Waxa jira laba tartan oo uuna wali gool ka dhalin: Ronaldo ayaa ka soo ciyaaray Portugal,England iyo Spain xiddiga ayaa dhamaan goolal dhaliyay tartamada uu soo ciyaaray marka laga reebo tartamada Community Shield Iyo the Europa League, Community Shield ayuu ciyaaray hal kulan wax gool ahna muu dhalin halka uu Europe league laba kulan ciyaaray isna uuna waxba dhalin.
3.Waxa uu dhaliyay 99 labaley: Ronald ayaa dhaliyay 99 labaley intii uu ciyaarayay noloshiisa ciyaareed waxa uu man United u dhaliyay 25 Labaley halka uu Real Madrid u dhaliyay 73.
4.Waa Xiddiga Ugu goolasha badan taariikhda dalkiisa Portugal: Ronaldo ayaa ah xiddiga ugu goolasha badan taariikhd xulka Portugal isaga oo dhaliyay 79 gool 147 kulan oo uu ciyaaray.
5.Kooxda Sevilla ayaa Ah Dhibanaha Uu ugu jecelyahay: Ronaldo ayaa sevilla ka dhaliyay 27 gool 18 kulan oo uu ka hor tagay tartamada oo dhan walina wuu sii wadi karaa.
6.Waa Xiddiga Ugu goolasha badan taariikhda Kooxda Real Madrid: Ronaldo ayaa ah xiddiga ugu goolasha badan taariikhda Real isaga oo dhaliyay 427 gool 421 kulan oo uu u ciyaaray.
7.Goolhayaha Gorka Iraizoz Ayaa Ah Dhibanaha Ronaldo: Gorka Iraizoz ayaa ah goolhayaha uu Ronaldo ka dhaliyay goolalka ugu badan isaga oo 14 kulan ka hor tagay kana dhaliyay 15 gool.
8.Waxa uu dhaliyay 11 gool oo Final ah: Cristiano ayaa ciyaaray 13 final marka laga hadlo kooxdiisa waxa uu dhaliyay 18 gool.
9.Waxa uu 3 jeer ku guulaystay Abaalmarinta Gool Dhalinta Spain ee Pichichi: Cristiano Ronaldo ayaa abaalmarinta Pichichi ku guulaystay 3 jeer kuwaas oo kla ah 2010/11, 2013/14 Iyo 2014/15, xilli ciyaareedkii 2014/2015 ayaa ah wakhtigiisii ugu fiicnaa dhanka goolasha waxana uu dhaliyay 48 gool.
10:Waxa uu 5 jeer ku guulaystay Abaalmarinta Ballon d’Or: Si La Mid ah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ayaa ah xiddiga ugu guulaysiga badan abaalmarintan Ballon d’Or isaga oo haysta 5 abaalmarintaas ah kuna guulaystay labadii jeer ee ugu dambaysay.
11.Waxa uu 6 jeer noqday xiddiga ugu Goolasha badan champions league: Waxa uu noqday xiddiga ugu goolasha badan Premier league 5 jeer oo xiriir ah tan iyo xilli ciyaareedkii 2007/2008 markaas oo uu United ku noqday xiddiga ugu goolasha badan tartanka markii ugu horaysay.
12.Waxa uu 61 gool dhaliyay hal xilli ciyaareed: xilli ciyaareedkii 2014/2015 Ronaldo ayaa noqday xiddiga ugu goolasha badan xilli ciyaareed gudihii waxana uu dhaliyay 61 gool isaga oo dhaafay 60 gool oo uu dhaliyay 2011/2012.
13.12 xilli ciyaareed ayuu dhaafay 20 gool: tan ilaa 2006/2007 Ronaldo ayaa mar walba dhaafa rikoorka 20-ka gool oo ah rikoorkiisii ugu hooseeyay kaas oo ah 23 gool waxana uu xilli ciyaareedkan durba dhaliyay 21 gool.
14.Waa Xiddiga ugu badan ee Rikoorayaasha Gool u badalay taariikhda La Liga: Ronaldo ayaa dhaliyay 77 rikoore oo ka mid ah 90 rikoore oo loo dhigay.
15.Waxa uu dhaliyay 53 gool oo Laag xor ah: Ronaldo ayaa dhaliyay 53 gool oo laaga xorta ah isaga oo 7 ka mid ah ka dhaliyay Portugal halka uu 33 kale ka dhaliyay Real Madrid.
16.Waxa uu 107 gool ku dhaliyay Madaxa: Waxa uu takhasus ku yahay kubadaha cirka, weeraryahanka ayaa dhaliyay 107 gool oo madaxa ah noloshiisa ciyaareed 65 ka mid ah waxa uu ku dhaliyay Real.
17.Waxa uu kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda 1-aad saftay 2002: Ronaldo ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda 1-aad saftay 14-kii bishii August 2002 isaga oo u saftay kooxda Sporting Lisbon waxana uu la ciyaaray Inter Milan kulan ahaa is reeb-reebka champions league waxana uu ahaa 17 sano jir.
18.Waa xiddigii ugu horeeyay ee 100 Gool ka dhaliya Champions Leageu: Ronaldo ayaa isku qoray taariikhda champions league isaga oo noqday xiddigii ugu horeeyay ee abid 100 gool ka dhaliya tartanka waxana uu leeyahay haatan 115 walina wuu sii wadi karaa, Waxana uu Real u dhaliyay 99 gool.
19.Waxa uu Real u dhigay rikoorka goolasha xiriirka ah ee xilli ciyaareedka La Liga: Xilli ciyaareedkii 2014/2015 Ronaldo ayaa dhaliyay 19 gool 10 kulan oo xiriir ah waana xiddiga kaliya ee Real sidaas sameeyay.
20.Waxa uu Kulankiisii Ugu Horeeyay Ee Heerka Caalami ku saftay 17 jir: Ronaldo ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee xulka Portugal ku saftay 17 jir kulan ay la ciyaarayeen xulka Kazakhstan, tan ilaa haatan waxa uu ugu ciyaaraa si joogto ah.
21.Waxa uu 5 gool dhaliyay 2 jeer: Maaha wax fudud in aad hal kulan dhaliso wax ka badan 4 gool, Laakiin Ronaldo ayaa laab kulan dhaliyay min 5 gool waxana uu ka dhaliyay kooxaha Granada iyo Espanyo.
22.Waxa uu 331 gool ku dhaliyay lugtiisa Midig: Goolashiisa ayaa ka yimid meel kasta oo garoonka ah si kasta ha ahaatee xiddiga ayaa inta badan goolasha ku dhaliya lugtiisa midig waxana uu ku dhaliyay 331 gool.
23.Waxa uu Lionel Messi Ka Hor Tagay 34 jeer: Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa ah labada xiddig ee ugu fiican 10-kii sano ee ugu dambaysay waxana ay iska hor yimaadeen 34 jeer xiddiga reer Argentine ayaa dhaliyay 20 kulan halka uu Ronaldo dhaliyay 18 jeer.
24.Waxa kaarka cas loo taagay 6 jeer: Ronaldo ayaa kaarka cas wajigiisa la tusay 6 jeer noloshiisa ciyaareed markii ugu dambaysay ayaa ahayd kulankii Spanish Super Cup ee ay la ciyaarayeen Barcelona.
25.Waxa uu soo xirtay 4 Number oo kala duwan: Ronaldo ayaa ku caan baxay No.7 laakiin maaha number-ka kaliya ee uu noloshiisa oo dhan soo xirtay xiddiga ayaa sidoo kale oo xirtay Number-ada 17,9 iyo 28 oo xulka iyo naadiga ah.
26.Waxa uu 329 kulan ka soo garab ciyaaray Benzema: Xiddiga uu kulamada ugu badan ka garab ciyaaray ayaa ah Benzema, xiddiga reer France ayay garoonka wada galeen 329 kulan.
27.Goolkiisii ugu horeeyay: 7-dii bishii October 2002 Ronaldo ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay waxa uu ahaa kulan horyaal ah oo portugal ah waxana uu ka dhaliyay kooxda Moreirense, waxana uu isla kulakaas dhaliyay labadii gool ee ugu horaysay noloshiisa.
28.Waxa uu ka soo hoos ciyaaray 10 Tababare oo kala duwan: Cristiano Ronaldo ayaa la soo shaqeeyay 10 tababare oo kala duwan 2002 ilaa haatan.
29.Waxa uu gool dhaliyay 11 kulan oo xiriir ah: Waa rikoorkiisii ugu fiicnaa ee goolasha xiriirka ah isaga oo gool dhaliyay 11 kulan oo xiriir ah waxana uu ahaa xilli ciyaareedkii 2013/2014 waxana uu dhaliyay 15 gool.
30.Waxa uu ku guulaystay 12 koob: Waxa uu ku guulaystay 12 gool kooxihii uu u ciyaaray oo dhan waxana ka mid ah koobabkaas European Championship, Club World Cup, Champions League, European Super Cup, Spanish Super Cup, Portuguese Super Cup, LaLiga, Premier League, Community Shield, FA Cup, Iyo English League Cup.
31.Guushii Ugu Weynayd ee uu gaaro ayaa ahayd 10-2: 20-kii bishii December 2015 Real Madrid ayaa 10/2 uga badisay kooxda Rayo Vallecano waana gushii ugu weynayd ee Ronaldo waxana uu dhaliyay 2 gool.
32.Rikoorka gool dhalinta xilli ciyaareedka champions league: 17 gool oo uu Ronaldo dhaliyay 2013/2014 champions league ayaa ah rikoorka uu ka dhigay tartanka.
33.Waxa uu wajahay 128 kooxood: Waxa uu ka hor tagay 128 kooxood oo kala duwan noloshiisa ciyaareed oo ay ka mid yihiin kulamada xulka qaranka.